आउँदो वर्ष मुलुककै उत्कृष्ट विद्यालय बनाउनेछौं | Aaja ko Shiksha
२०७७ असार २९ गते / 13th Jul 2020, Monday
नारायणी नमूना मावि, भरतपुर, चितवन
विद्यालयको अवस्था कस्तो छ ?
समग्रमा भन्नुपर्दा उत्साहजनक नै छ । शुरुमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर एकदमै कमजोर थियो । २०२० सालमा दिनभर काम गर्ने र राती पढ्नेहरुका लागि खोलिएको रात्री विद्यालय हो । उमेर पुगेका र पाका मान्छेहरुले रात्रीकालीन समयमा पढ्ने भएकाले गुणस्तर अत्यन्तै नाजुुक थियो । यो विद्यालयलाई अझैपनि पुराना मान्छेहरुले नामले भन्दापनि रात्री विद्यालय भनेरै चिन्छन् । यो विद्यालय प्रावि, निमावि र मावि भएको नभई पहिले मावि, निमावि हुँदै पछि मात्रै प्राविमा गएको हो । राती विद्यार्थी कम भएपछि बिहानमा लगियो । बिहान लैजाँदा पनि खासै विद्यार्थी नआएपछि २०४१ देखि दिउँसो सञ्चालन गर्न थालियो । शुरुका केही वर्ष विद्यालय एसएलसी नतिजामा निल नै भयो । अन्त फेल भएपनि रात्री स्कूल छदँैछ नि भन्दै बजारतिरका फेल भएका, आवारा, अनुशासनहीन विद्यार्थी पढ्न आउने गर्दथे । जसले गर्दा शैक्षिक स्तर राम्रो हुने पनि कुरा भएन । तर, पछिल्लो दिनमा राष्ट्रियस्तरमै गौरव गर्नसक्ने बन्दै गएको छ । हामी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढाउनुभन्दा पनि शिक्षालाई व्यवहारसँग जोड्नका लागि लागिरहेका छौं । १२१ मापदण्ड पुरा गरेर सरकारबाटै नाममै नमूना लेख्न अनुमति पाउने मुलुककै एक मात्र विद्यालय नारायणी नमूना मावि मात्रै हो । २२२ नमूना विद्यालय छनौट भएपनि उनीहरुले बजेट मात्रै पाउने हो । नाममा नै नमूना लेख्न पाउँदैनन् । प्रअ र विव्यस अध्यक्षको परिवारमा तीन पुस्तामा नमूना नाम भएका कोही भएमा हामीले नमूना लेख्न पाउँदैनथ्यौं ।
सुधारको शुरुवात कसरी गर्नुभयो ?
विद्यालयको गिर्दो नतिजादेखि हैरान हुनुभएका तत्कालीन प्रअ टेकबहादुर थापाको नेतृत्वमा गुणस्तर सुधारका लागि नयाँ प्रयासहरु गर्न शुरु भए २०४९ साल तिरबाट । त्यसका लागि शुरुमा हप्ताको ३/३ दिन अंग्रेजी र गणितको थप कक्षा लिन शुरु गरियो । हल्ला पनि गर्ने, केही राम्रा विद्यार्थी तान्ने र विद्यार्थीको स्तर अनुसार सेक्सन विभाजन गर्न भनेर त्यसपछि प्रवेश परीक्षा लिई विद्यार्थी भर्ना गर्न शुरु गरियो २०५०÷५१ तिर । तेस्रो प्रयासस्वरुप उत्तीर्ण प्रतिशत ३२ बाट बढाएर ४० बनाइयो । पछि प्रथम त्रैमासिक र अर्ध वार्षिक परीक्षामा पास नभए माथिल्लो कक्षामा जान नसक्ने व्यवस्था ग¥यौं । यी सब हल्लाका लागि मात्रै गरिएको थियो । तर, यसले गर्दा विद्यार्थीहरु शुरुदेखि नै मिहिनेत गरेर पढ्न थाले । यसले गर्दा बाहिरबाट पनि मिहिनेती विद्यार्थी आउन थाले र गुणस्तर सुधार हुन थाल्यो ।
२०५७/५८ मा पुगेपछि विद्यालयले जिल्लामा प्रथम हुन शुरु ग¥यो । लगातार ८/१० वर्ष विद्यालय जिल्ला प्रथम हुँदै गयो । २०६८ सालदेखि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रुपमा पनि मूल्याङ्कन शुरु गरेपछि पहिलो वर्ष मध्यमाञ्चल आठौं भयो । २०६९ मा राष्ट्रिय पाँचौं भयो । ०७० मा छैटौं, ०७१ मा एक्साइसौं, ०७२ मा राष्ट्रिय दोस्रो र मध्यमाञ्चल प्रथम भयो । २०७३ मा देशभरको दोस्रो र ३ नम्बर प्रदेशको उत्कृष्ट विद्यालय बन्न सफल भयो । यस वर्ष लगभग ३०० विद्यार्थी एसइइ परीक्षामा सहभागी भइरहेका छन् । आशा छ, हामी आगामी वर्ष मुलुककै उत्कृष्ट विद्यालय बन्नेछौं । यसका लागि शिक्षक समूह निरन्तर मिहिनेतमा जुटेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको चासो किन कम भएको होला ?
हामी मिहिनेती भए र राम्रो गुणस्तर दिन सके विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो रोजाइ बन्न सक्छौं । हाम्रै विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने कक्षा १० मा ६ वटा र ९ कक्षामा ३५० विद्यार्थीका लागि ७ सेक्सन छ । कुल २,००० विद्यार्थी छन् । हामी अहिले पनि प्रवेश परीक्षा लिन्छौं र धेरै विद्यार्थी फाल्नलाई लिन्छौं । जहिल्यै ११ र १९ वैशाखमा दुईपटक परीक्षा हुन्छ । गत वर्ष ७५८ जनाले परीक्षा दिएकामा ४ सय मात्रै उत्तीर्ण भए । दोस्रोपटक पनि २ सय बाहिरिए । राख्ने क्षमता भए हामी जतिपनि विद्यार्थी संख्या पु¥याउन सक्छौं ।
शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ ?
कक्षा ११ र १२ मा व्यवस्थापन र विज्ञान संकाय सञ्चालनमा छन् । यसमा पनि निजीका प्लस टुभन्दा हाम्रो नतिजा उत्कृष्ट छ । एसइइमा ए प्लस र एभन्दा मुनिकालाई हामी भर्ना नै लिँदैनौं । सिकाइमा मात्रै होइन, हाम्रा विद्यार्थी खेलकुदलगायत अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत उत्कृष्ट रहँदै आएका छन् । हाम्रा एकजना विद्यार्थीले फिलिपिन्सको मनिलामा गई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर आए । जिल्लामा हाम्रो विद्यालय आयो भनेपछि मैदान नै खाली गरिदिने जस्तो अवस्था छ । गत वर्ष एसइइ परीक्षामा ५० जनाको ए प्लस आएको थियो । यस वर्ष १०० जनाले ल्याउने हाम्रो अनुमान छ । यहाँबाट जाने विद्यार्थीले अरु ठाउँमा राम्रो गरिरहेका छन् । गत वर्ष मात्रै पुल्चोक इञ्जिनियरिङमा हाम्रा तीनजना विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा नाम निकाले ।
बाहिरबाट हेर्दा देखिने विद्यालयका विशेषताहरु के–के छन् ?
झट्ट बाहिरबाट हेर्दा विद्यालय भरतपुरको माझमा देखिन्छ । भौतिक रुपमा पनि सम्पन्न छ । घेरा पर्खाल, हरियाली, फूलबारी, सुरक्षा, सफा, अनुशासन सबै कुराले गर्व गर्नलायक नै छ । हाम्रा विद्यार्थी विदा भएर बाहिर निस्कन मात्रै आधा घण्टा लाग्छ । पूरै ठाउँ नै हाम्रा विद्यार्थीले ढाकेको झैं देखिन्छ । अंग्रेजी माध्यम लागू गरेका छौं । हरेक कक्षामा प्रोजेक्टरबाट शिक्षण हुन्छ । हरेक शुक्रबार कक्षा ८ र १० को परीक्षा लिन्छौं । उत्तरपुस्तिका अभिभावककहाँ पठाइदिन्छौं । नतिजाको विश्लेषणका आधारमा अघि बढ्छौं । विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई डायरी दिएका छौं । शिक्षकले हरेक दिन पढाउने र पढाएका विषय विद्यार्थीले सिकेको विषयवस्तु टिप्ने गर्छन् । विद्यार्थीलाई शिक्षक लगबुक दिन्छौं । हरेक दिन कुन शिक्षकले के पढाए भन्ने लेख्नु पर्छ । हरेक मसान्तमा त्यो प्रअलाई बुझाउनु पर्छ । हाल ३० जना दृष्टिबिहीन विद्यार्थीका लागि होस्टेल सञ्चालन गरिरहेका छौं । २९ जना सुस्त मनस्थिति विद्यार्थीका लागि दिवा होस्टेल सञ्चालन गरेका छौं । उनीहरुका लागि गाडीमा ल्याउने लैजाने र निःशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका छौं । एउटा ठूलो परिवार जस्तै मिलेर बसेका छौं । स्थानीय समुदाय, जिल्लामा सरुवा भएर आउने कर्मचारी सबैको पहिलो रोजाइ यही विद्यालय हुने गरेको छ । अहिले नारायणी विद्यालयको विकल्प निजी विद्यालय होइन, निजी विद्यालयको विकल्प नारायणी मावि बन्न पुगेको छ । यहाँ भर्ना नपाए मात्रै निजीमा जाने चलन शुरु भएको छ ।
शिक्षकहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
हामीकहाँ पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन । ३४ जना मात्रै सरकारी दरबन्दी छ । ७२ जना शिक्षक–कर्मचारी छौं । बाँकी सबै निजी स्रोतमा व्यवस्थापन गरेका छौं । अभिभावकहरुले इच्छाले गर्ने आर्थिक स्रोतबाहेक विद्यालयको आम्दानी अन्य केही छैन । हामीले हरेक तहमा छुट्टै व्यवस्थापक बनाएका छौं । प्रअले हरेक व्यवस्थापकहरुसँग सम्पर्क गरे पुग्छ । हरेक शिक्षकहरुसँग शैक्षिक शत्रको शुरुवातमै यति प्रतिशत उत्तीर्ण गराउँछु भनेर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्छौं । त्यसो त, विद्यार्थीले पनि यति सुधार गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन् । यस वर्षको एसइइ परीक्षामा थोरै ल्याउछु भन्नेले पनि ६५ प्रतिशत र बढी भन्नेले ९५ प्रतिशत ल्याउछु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्लामा राम्रो नतिजा ल्याउने शिक्षकहरुलाई जिशिकाले वर्षैपिच्छे गर्ने पुरस्कार वितरणमा १९ जना नारायणी माविका मात्रै हुनुभयो । अतिरिक्त कक्षा लिने र विदामा नबस्ने शिक्षकलाई थप सुविधा दिने भएकाले शिक्षकहरु सितिमिति विदा बस्नुहुन्न । हामीले ९ जना एमएसी गरेका शिक्षक निजी स्रोतमा राखेका छौं । एमएड गरेका मात्रै ११ जना शिक्षक राखेका छौं । हामीले धेरै पढेकालाई तल्लो कक्षामा राख्ने गरेका छौं ।
समुदायको साथ कत्तिको पाउनुभएको छ ?
समुदायको निकै सहयोग छ । समुदायले सधैं सबैतिर नारायणी जस्तो विद्यालय हुनु पर्छ भन्नुहुन्छ । विव्यसले रातदिन नभनी खट्छ । विव्यसको बैठकमा रिसाउनुपर्ने, चर्कोसाग बोल्ने गनुृपरेको छैन । सहयोगी छ । विव्यसका अध्यक्ष पूर्व प्रअसमेत रहनुभएका टेकबहादुर थापा विगत चार वर्षदेखि निर्विरोध हुँदै आउनुभएको छ । उहाँ घर–परिवारभन्दा विद्यालयलाई माया गर्नुहुन्छ । हामीलाई गर्व पनि लाग्छ । सबैतिर सामुदायिक विद्यालयहरु खस्कँदै गइरहेको अवस्थामा हामीले यतिसम्म गर्न सकेछौं जस्तो लाग्छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय आउन हतार गर्ने र दिनभर रमाएर सिक्ने गर्छन् । मन्टेश्वरी प्रशिक्षण लिनुभएका शिक्षक र पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीसहितको नर्सरी कक्षा हेर्न लायक छ । नर्सरी र केजी पछि बल्ल कक्षा १ मा जाने व्यवस्था गरेका छौं । हाम्रा सबै शिक्षकहरु आफ्ना छोराछोरी यही विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ । मेरा तीनजना छोराछोरी यहीबाट पढेका हुन् । केही शिक्षकले एसओएसलगायतका अन्य निजीस्तरका विद्यालयबाट निकालेर समेत हाम्रोमा ल्याउनुभएको छ ।
विद्यालयको आगामी योजना के–के छन् ?
हामीलाई अझैं १२६ कोठा आवश्यक छ । पाँच वर्षमा ५,००० विद्यार्थी पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । विद्यालयले २०० विद्यार्थीका लागि होस्टेल बनाउँदैछौं । अर्को वर्षदेखि ११ मा तीन वर्षे आएसइ एजी र कम्प्यूटर इञ्जिनियरको कक्षा शुरु गर्दैछौं । हामी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भनेर ‘नारायणी इञ्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट’ भनेर शुरु गर्दैछौं । नौ प्राविधिक विषय अध्ययन हुनेछ । सबै तयारी पूरा भएको छ । हामी प्राविधिक र साधारण गरी दुई शिक्षालय सञ्चालन गर्दैछौं । एउटा वृहत् विद्यालयको मोडलमा जाने उद्देश्य राखेका छौं । स्वीमिङ पुल, अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ बन्दैछन् । पार्क, खेलमैदान बन्दैछन् । विद्यालयमा प्रवेश गरेपछि अर्कै संसारमा पुगेको जस्तो बनाउने हाम्रो योजना छ । काम अघि बढिरहेको छ । एक कक्षामा प्रवेश गरेको एउटा बच्चा १२ उत्तीर्ण गर्दा उसको हातमा शैक्षिकसँगै प्राविधिक सीपको प्रमाणपत्र दिने योजनामा छौं ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर नउकासिनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र स्वयं शिक्षकै व्यवहार सन्तोषजनक भएन । शिक्षकहरु विभिन्न संगठनमा विभाजित छन् । ‘सामुदायिक विद्यालय पढाइ नराम्रो हुने ठाउँ हो, ऋण गरेर भएपनि निजीमै पढाउनुपर्छ’ भन्ने आम अभिभावकको सोचाइ बन्यो । त्यसलाई चिर्न हामी असफल भयौं । विव्यसमा चरम राजनीतिक खिचातानी र विद्यालय सञ्चालनमा उनीहरुको अवरोध देखिन्छ । तर, पछिल्लो दिनमा सुधार आउँदैछ । चितवनमा सामुदायिकबीच कडा प्रतिस्पर्धा शुरु भएको देखिन्छ । को भन्दा को कम को अवस्था बनेको छ । स्थायी, तालिमप्राप्त, प्रतिस्पर्धी शिक्षक हुँदा पनि व्यवस्थापनको कमीले सामुदायिक अब्बल बन्न सकिरहेका छैनन् ।
शिक्षकले बढी राजनीति गरेर समस्या भएको हो ?
एकाध मान्छेको आधारमा तीन लाख शिक्षकलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन । केहीले गरेका होलान् तर समग्रमा त्यस्तो छैन । विचार र आस्था हुन सक्ला । म पनि नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय सहअध्यक्ष हुँ । म दलीय राजनीतिभन्दा शैक्षिक सुधारको राजनीति गर्ने मान्छे हुँ । प्रअ भिजन भएको मोडल हुन जरुरी छ । ऊसँग सुधारको मार्गचित्र हुन जरुरी छ । जागिर खाने मात्र शिक्षकले केही हुँदैन, केही गरौं भन्ने शिक्षक समूह हुन जरुरी छ ।
सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनुमा हाम्रो नीतिमा समस्या हो कि नियतमा ?
नीतिमा पनि समस्या छ अनि नियतमा । सरकारले सामुदायिकको स्तर उकास्ने नीति ल्याउन सकेको छैन । निजीमा छोराछोरी पढाउनेहरुले नीति बनाएको अवस्था छ । सबैले सामुदायिकमा पढाउने नारा ल्याए ५ वर्षमा निजीभन्दा अब्बल बन्छन् सामुदायिक विद्यालय । राम्रा निजीमा पठाउने, कमजोर हामीकहाँ पठाउने र निजी जस्तै बना भन्ने ? पाठ्यक्रम पनि अहिलेको विद्यार्थी सुहाउँदो समयसापेक्ष छैन । पढाउने ढंगमा पनि सुधार ल्याउन जरुरी छ । हाम्रोमा भर्ना गरिदिन भनेर मन्त्री, विशिष्ट व्यक्तिको फोन आउँछ । निजीले थोरै र राम्रा विद्यार्थीलाई पूरै घोकाएर सिकाउँछ । हाम्रोमा धेरैका निम्ति मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : रोशन गाउँले
सिन्धु विद्यालय स्थापनाका साक्षी अंग्रेजी शिक्षाका पक्षधर पोषप्रसाद नेपालको निधन
२०७७ असार २८ गते
सिन्धुपाल्चोकका पुराना शैक्षिक अभियन्ता एवं शिक्षक पोषप्रसाद नेपालको शनिबार राती ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । लामो समयदेखि विरामी पर्नुभएका नेपालको ...
सामाजिक विकास मन्त्रीहरुलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह–सिटिइभिटिका कार्यक्रममा दोहोरोपना नगरौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय शिक्षा ऐन नआउँदासम्म प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिम कार्यक्रममा दोहोरोपना नआउनेगरी ...
सीपप्रदायक संस्था एकातिर, रोजगारदाता अर्काेतिर
२०७७ असार २३ गते
‘बजारको मागअनुरुप रोजगारी र सीप दिनेबीच अन्तर्सम्बन्ध जरुरी’ राष्ट्रिय आवश्यकता र बजारको मागअनुरुप जनशक्ति उत्पादन नहुँदा नेपालमा प्राविधि ...
'वैकल्पिक शिक्षणमा विद्यार्थीको सहभागिता न्यून'
चैतको साटो वैशाखको मिनाहा गर्दै जेठ यताको शुल्क लिने प्याब्सन/एन प्याब्सनको प्रस्ताव